Top 3 Beddelka iSyncr u Mac iyo PC
iSyncr, sida ay magaca soo jeedisay, waa software yar oo loo isticmaalo in lagu hagaagsan Lugood music, filimada, bandhigyada TV, podcasts oo dheeraad ah oo ka soo Lugood in telefoonka aad Android oo kiniin ah. Waa arrin si fudud loo isticmaali marka aad go'aansato inay iska ilaawaan Lugood u Android. Si kastaba ha ahaatee, waxaa syncs playlists oo la soo doortay, laakiin ma ha aad doorato in aad u hagaagsan songs soo xulay. Taasi micnaheedu waa in, mar walba oo aad rabto in aad u hagaagsan Lugood in Android, aad leedahay si aad u hubiso in qalabka Android aad leedahay kaydinta ku filan. Ama ma aad samayn kartid si guul leh u hagaagsan. Taa ka sii daran, la isticmaali karaa marka Samsung Kies la geliyo. Haddii aad tahay qof user Samsung ah, waa in aad doorasho samayso: iSyncr ama Kies? Dareen xumaaday oo ku saabsan? Waad eegi kartaa qaar ka mid kale oo kale oo ay ku iSyncr. Malaha waxaa Khayr ka shaqeeyaa.
Samsung Kies waxaa inta badan loo isticmaalaa in lagu maareeyo content qalabka Samsung ka Mac ama PC. Waxaa aad u saamaxaaya in ay gurmad xiriirada, fariimaha, jadwalka taariikhda, sawiro iyo ka badan si uu computer iyo content tani dib u soo celineysa si fudud. Waxay kuu ogolaanaysaa inaad ku wareejiso music, video iyo sawiro iyo ka qalab Samsung aad. Haddii ay jirto update software aad qalab Samsung, waxaad isticmaali kartaa Kies in ay si fudud u cusbooneysiin.
Si kastaba ha ahaatee, failure xiriir ah Samsung Kies la ma iska indho tiri karin. Tan iyo in kaliya ay heli karo qalabka Samsung, aad leedahay si aad u hesho kale kale marka aad leedahay qalab kale, sida Google Nexus 5.
Si ka duwan Samsung Kies, Wondershare TunesGo (Mac) ama Wondershare TunesGo (Win) waxaa loo sameeyey dadka aawadiis ee telefoonada badan Android iyo murriyado, oo ay ku jiraan Samsung, HTC, Sony, Google, LG, Motorola, Huawei, iyo in ka badan. Iyada oo ay caawimaad, waxaad si fudud u hagaagsan karaa Lugood leh Android on Mac iyo PC.
Nidaameed Lugood in Android - kaliya 1 click.
Hagaagsan oo dhan ama music Lugood, playlists, filimada, TV muujinaysaa, podcasts soo xulay, Lugood U.
Mac iyo PC wareejiyo Androd u music, filimada, playlists iyo in ka badan.
Nadiifi maktabadda Lugood iyadoo la tirtirayo songs nuqul, qamaar tag music, iyo saxo artist iyo songs'names.
Si fiican u shaqeeyaan Android 2.1 iyo kor.
Sida iSyncr, doubleTwist leeyahay 3 versions (for PC, Mac iyo Android) laga heli karo. Waa aalad khafiifa, kaas oo aad u hagaagsan karaa Lugood music, videos iyo sawiro si aad telefoonka Android ama kiniin la cable USB ah. Its version Android doubleTwist AirSync waa ciyaaryahan si sahlan loo isticmaalo music. Waxaad u isticmaali kartaa si aad u hagaagsan music Lugood, muusig iyo maarayn podcasts wirelessly. Si kastaba ha ahaatee, Waxa ay taageeraan aan qalabka la Android 4.3 iyo ka dib marka ay isku xira via cable USB. Dabcan, waxaad isticmaali kartaa WiFi, laakiin waa in aad bixisay waxaa loogu talagalay.
3 Hababka in ay ku xidhmaan Android la Mac
2 Siyaabaha Copy Lugood Music inay HTC
Top 4 doubleTwist lagu bedelan karo in aad u
2 Siyaabaha Bedelka Music ka Mac si ay Android
Nidaameed wax kasta u dhaxaysa Android iyo Mac
Ka Lugood Bedelka Music inay Nexus 5/4/7
Top 3 SyncMate lagu bedelan karo
Nidaameed Lugood leh Android
Best Transfer Alternative Android File
3 Siyaabaha Bedelka Lugood Music in Samsung
Top 7 Android Music Maareeyayaasha
Easeus tirtiray kabashada file waana dhabaha ugu wanaagsan
Top Toban WinX DVD Author Player lagu bedelan karo
Roxio Mischeif Converter aan shaqaynayn? Isku day ay Alternative hadda
Sorenson Tuuji aan shaqaynayn? Isku day ay Alternative hadda
YouTube Catcher Alternative: Download Online Video fiican yahay YouTube Catcher
The Best kasta Video Converter Ultimate Alternative
> Resource > bedelan karo > Top 3 Beddelka iSyncr u Mac iyo PC